खेल « News24 : Premium News Channel
काठमाडाैँ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजको नेतृत्वमा नेपाल बक्सिङ सङ्घका पदाधिकारीसहित आठ सदस्यीय टोली आज रुस प्रस्थान गरेको छ । बक्सिङ फेडरेशन अफ रसिया र रसिया फेडरेशनको खेलकुद
हालान्ड चम्कदा नर्वेको जित
एजेन्सी । युइएफए नेसन्स लिगमा नर्वेले जित निकालेको छ । गएराति भएको खेलमा नर्वेले स्वीडेनलाई ३-२ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । नर्वेलाई जित दिलाउनको लागि युवा स्टार एर्लिङ ब्राउट
स्वीट्जरल्याण्डसँग पोर्तुगल पराजित
एजेन्सी । युइएफए नेसन्स लिगमा पोर्तुगल पराजित भएको छ । गएराति भएको खेलमा पोर्तुगल स्वीट्जरल्याण्डसँग १-० गोल अन्तरले पराजित भएको हो । घरेलु टोलीको जितमा हरिस सेफेरोभिकले गरेको गोल नै
काठमाडाैं । आइसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग दुई त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजअन्तर्गत नेपाल र अमेरिकाबीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ । अमेरिकाको मुसा क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा नेपाल र अमेरिकाले बराबरी खेल्दै
म गोर्खाली हुँ, मलाई केही हुँदैन : मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरी
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले आफू गोर्खाली भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक संजाल फेशबुकमा स्टाटस लेख्दै आफू गोर्खाली भएको र आफूलाई केही नहुने बताएका
रोनाल्डोमाथि लागेको बलात्कारको मुद्दा खारेज
एजेन्सी । पोर्चुगिज फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि लागेको बलात्कारको मुद्दा खारेज भएको छ । एक अमेरिकी महिलाले रोनाल्डोमाथि लगाएको बलात्कारको मुद्दा अमेरिकी न्यायाधीश जेनिफर डोर्सीले मुद्दा खारेज गरेका हुन् । ती
मुटुको समस्या बोकेका अल्मुताइरीको अवस्था कस्तो छ ? जो आफ्नै भूमीको खेल मैदानमा ढले
काठमाडौं । शनिबार राति भएको नेपाल र कुवेतबीचको खेल जारी रहँदा अचेत भई ढलेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्शिक्षक अध्दुल्लाह अल्मुताइरीको अवस्था सामान्य भएको छ । मटु र मेरुदण्डकोसमेत
इंग्ल्याण्ड र इटाली बराबरी खेले
एजेन्सी । युइएफए नेसन्स लिगमा इंग्ल्याण्ड र इटाली बराबरी खेलेका छन् । गएराति भएको खेलमा इंग्लाण्ड र इटाली गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाडेका हुन् । इंग्ल्यान्डमा शनिबार राति भएको प्रतिस्पर्धात्मक
घरेलु मैदानमा नेदरल्याण्डस बराबरीमा रोकियो, मेम्फिस डिपाए पेनाल्टीमा चुके
एजेन्सी । युइफए नेसन्स लिगमा नेदरल्याण्डस बराबरीमा रोकिएको छ । गएराति भएको खेलमा इन्ज्युरी समयमा मेम्फिस डिपाए पेनाल्टी चुकेपछि नेदरल्याण्डस पोल्याण्डसँग २-२ को बराबरीमा रोकिएको हो । घरेलु टोली नेदरल्याण्डसको
कुवेतसँग नेपालकाे लजास्पद हार, प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी बेहोस !
काठमाडौं । एएफसी एसियन कप २०२३ छनोट खेलमा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ । गएराति भएको खेलमा नेपाल कुवेतसँग ४-१ गोल अन्तरले पराजित भएको हो । घरेलु टोली कुवेतलाई
प्रथम केएफटीसी सिटी लिग यु–१४ को उपाधि ह्याप्पी क्लबलाई
युवराज आचार्य, झापा । झापाको मेचीनगरमा जारी प्रथम केएफटिसी सिटी लिग यु–१४ फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि ह्याप्पी क्लबले जितेको छ । काँकरभिट्टा माविको खेल मैदानमा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा संगम फुटबल
‘खाली हात फर्किन्नौं’ : कप्तान रुबिना क्षेत्री
काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित त्रिभूवन विश्व विद्यालयको मैदानमा नेपाली राष्ट्रिय महिला टोली मलेसियामा आयोजना हुने एसिसि महिला टी–२० च्याम्पियनसीपको तयारी गरिरहेको छ । एशिया कप छनोट हुने लक्ष्यकासाथ टोलीले च्याम्पियनसिपको तयारीलाई
काठमाडौँ । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गतको खेलमानेपाल ओमानसँग १३ रनले पराजित भएको छ । बिहीबार राति अमेरिकाको टेक्सासस्थित पर्लल्याण्डमा भएको खेलमा नेपालले उक्त हार व्यहोरेको हो । सुरुमा ब्याटिङ
नेसन्स लिग : स्पेनको पहिलो जित
एजेन्सी । युइएफए नेसन्स लिगमा स्पेनले पहिलो जित निकालेको छ । गएराति भएको खेलमा स्पेनले स्वीट्जरल्याण्डलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । स्पनेको जितमा पाब्लो सारावियाले गरेको गोल नै
नेसन्स लिग : पोर्तुगलको सहज जित
एजेन्सी । युइएफए नेसन्स लिगमा पोर्तुगलले सहज जित निकालेको छ । गएराति भएको खेलमा पोर्तुगलले चेक रिपब्लिकालाई २-० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । पोर्तुगललाई सहज जित दिलाउनको लागि जोओ